Qwalasela phawu-mkhwa pa parlour [Rom wave Operations]
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Qwalasela phawu-mkhwa pa parlour [Rom wave Operations]
Hit lwalunjani, ayeke phakathi ithemba noloyiko kwaye hit kakuhle, ndicinga ukuba pa mnandi ngokwenene. Noko ke, xa itulo na, ukuba ezinye izinto leswaku Chang, xa musa hit na ukubetha yonke, kusenokuba abanye abantu Ndiye ndicinge ukuba kuya kuba kutheni. E
, kwaye hit hit, ethetha apho kwaye sizimisele njani, ukuya omnye ngomnye kumatshini pa, ube yinxalenye ROM efakwe. ROM yaye ku lotto jackpot, umatshini yenkqubo okanye inxalenye ukuqinisekisa hit, ivalekile. Ingaba ukuba umatshini pa kwentliziyo. Ukuba
umzekelo, ukuba bathi, pa jackpot Lottery kufana roulette, ukujikeleza kujikelezwa okuphumelela enye, zama ukucinga zaqinisekisa nganye xa izakubekwa jackpot. Ngoko ke, ndicinga ukuba kulula ukuqonda sicinga ukuba sele yenziwe kwi ROM. ROM rhoqo, amathuba zibambe hit enkulu iza kuba hit okuba enkulu kumatshini pa.
into ibizwa ngokuba ROM kokusemva, Uchikata ezinjalo sele isigqibo, ukuze ususe le lula nganye, uthi ROM mthethweni. Nakuba kunjalo, kuninzi pa parlour, ngoko sisebenza ROM uhlala njalo wafika evela kumenzi, kodwa eli xesha, ndingathanda ukujonga ekufundweni ROM mkhwa rhoqo.
ROM rhoqo, siza ukuba bafudukele amathuba Jackpot esitratweni. Ukuba omnye lo amathuba okuba imizuzu 340, wabetha imini, uphindaphinde imini na hit, izinto ukuzama idibane kufutshane namathuba. Ku ca kumwenako, ukuba kukho iintsuku kungekho ezimbalwa ngamnye, kuba uzama ukuba uye esitratweni ngokuqinisekileyo, yaye waphuma kwangoko. Le ke yile nto kuthiwa ukuba nokulatyuza jackpot, kungenxa yokuba oko ngequbuliso intlawulo okanye ejection. Ephumile
, waphinda okanye phandle, oko malunga malunga ngenyanga, wathi ukuba idibane ku yindlela Jackpot esitratweni. Ukuze ufunde iliza enyangeni leyo, kukuba Funda lo mkhwa ROM rhoqo. Khetha le modeli ukuba ukhathazekile, ngenxa zegumbi pa yonke imihla, musa uphume imini walandelwa ngabantu imihla emininzi, yintoni umlinganiselo okwangoku sengqondo, okanye ephule ixesha ndisolule kwafika ibhola ngaphandle, Siza athathe i data ngokulinganayo.
ngayo, uze uqhubeke kwiinyanga ezimbalwa, nokulatyuza kwetafile, ebizwa ngokuba yi-mthetho wenu uya kubona. Ekuhambeni kwexesha ezilungileyo yomtshangatshangiso, ukuba utyalo-mali, oko kuthetha ukuthi ukuzuza ipesenti kusenokwenzeka ukuba kuvuka. Kwi pa, oko akuthethi ukuba umatshini yahlula esisiseko. Qalisa ibhola kuba akuthethi ukuba uwine 100%. Noko ke, elibe pa, babakhuphe ngesantya ixabiso igalelo kunye intlawulo, idatha ukwahlulwa umatshini uya kuphuma nje ixabiso lenani ngokuzenzekelayo ibalwa yonke imihla. namhlanje, weza
ntoni ekhulwini kulo, ukuba igqityiwe ishishini, ndiyazi ngoko nangoko. In
nesendlu pa, oko azimisele ukukwenza umatshini, kuya kuthunyelwa elithile oluqhutywa intloko yam. Kunoko, ube nomonde yaye ifuna amagunya lokuqaphela, kodwa oko akuthethi nokuba akuthethi kukho isiqinisekiso sokuba ngenene ngaphandle. Nantoni engacinganga, kunokuba kuqhubeka ungaveli ngaphandle, ndicinga ukuba kuhle ukuba ukukholelwa kangangoko ukuthi ukuzuza ipesenti ukunyuka. ROM kukuba, ngenxa yokuba kubhaliwe kuyo yonke umatshini itafile pa, ukuba unomdla, nceda uzame ukucela umngeni.
ngelixa ukubona lo mkhwa
Horukon, kufuneka ube nako ukutsala uloyiso kunye namathuba ephakamileyo ukuba bakwazi ukufunda nkqu amaza ROM kunye. It. Nantoni engacinganga, kunokuba kuqhubeka ungaveli ngaphandle, ndicinga ukuba kuhle ukuba ukukholelwa kangangoko ukuthi ukuzuza ipesenti ukunyuka. ROM kukuba, ngenxa yokuba kubhaliwe kuyo yonke umatshini itafile pa, ukuba unomdla, nceda uzame ukucela umngeni.
Horukon, kufuneka ube nako ukutsala uloyiso kunye namathuba ephakamileyo ukuba bakwazi ukufunda nkqu amaza ROM kunye.